Mhinduro dzekudzora deformation yemhepo & mvura tank-modification chikamu
Creativity 5 Comments Sep-28-2020
Vadiwa vaverengi, takataura nezve chikamu chekugadzira kudzora pre-deformation mold pachinyorwa chekupedzisira (Maitiro ekudzora deformation yemhepo & mvura tangi chikamu? -dhizaini chikamu), asi kuve nedhizaini yakanaka ndiyo yekutanga, isu tinodawo kuita. basa rakawanda rekugadzirisa kuti rigadzirise dimension zvinoenderana nechaiyo mold yekuedza mhedzisiro.Sezvaunoziva, chikamu chakasiyana chine geometry yakasiyana, saka mamiriro akasiyana ekuumba anofanirwa kuenderana nemhinduro dzakasiyana.ok, ndokumbira unditevere kuti tizive mhinduro yatingaite.
Kutaura zvazviri, kazhinji tinoda 4 times mold kuyedzwa kuti mold igadzirire kutengwa, uye muyedzo wega wega une basa rayo rekupa kuti mold ikwane.
T0 tryout ndicho chikwata chedu chemukati chiito chekutarisa basa remuvhu, uye kuona mhedzisiro ye pre-deformation yatakagadzira kana kugadzira muforoma ndeyechokwadi kana kwete.
Kuwana iyo data yechikamu chaicho deformation (Base end surface, chubhu orifice, maburi anokodzera, bhandi regungano…)
Edza kutsvaga nyaya dzese dze mold, zvisinei zviripachena kana zvakavanzika, semuenzaniso: kuvhura mold / kuvhara chiito, mold ejection chiito, zvinhu zvekuzadza chiyero chimiro, chikamu che de-molding chimiro, flash uye pfupi-kushevedzera etc.
Kuchengeta sampuli mutembiricha yakajairwa 24h ine chimiro chemahara, wobva wayera zviyero (iyo dimension inoshuma chete yekuchinja kwemukati), kunyanya kutarisa nzvimbo yetsoka, sekutwasanuka, flatness, kureba kwetsoka uye ukobvu.Nekuti tsoka nzvimbo inogara seyeyero datums.Kamwe T0 dimension report iripo, wobva wagadzirisa mold zvinoenderana neiyo newelding.
Nezve dimension kugadziridzwa mushure meT0, ingori hanya nekudzikama, kutwasanuka uye perpendicularity.
PaT1 tryout, kazhinji mutengi anobatana nesu pakuedza mold.uye tinofanira kuziva pazasi zvinangwa kubva kuT1.
Mold basa uye kufamba kunofanirwa kuve kwakanaka, uye chimiro chejekiseni chinofanira kumhanyiswa nechimiro chakagadzikana.
Samples dimension inofanira kunge yakanyatsonaka pane tsoka nharaunda kutwasuka, flatness uye perpendicularity.
Maawa makumi maviri nemana gare gare, kuyera iwo masampuli (yakazara dimension mishumo ichatumirwa kune mutengi) uye zvinoenderana nemhedzisiro yekuita iyo mold shanduko.
Kutsiva simbi yakapfava yepakati pekuisa kune inodiwa simbi yakaoma.Zvichakadaro tarisa chishandiso uye zviyero zvikamu kugadzirira cheki.
Kuita zvimwe zvidiki kugadzirisa nezve kutwasuka, flatness uye perpendicularity.
Kugadzirisa zvese kushivirira kwenzvimbo.
Zvinangwa zveT2 tryout ndezvi:
95% nzvimbo zviyero zvepombi, brekts uye zvimedu mukushivirira.Kuyera sampuli uye kutarisa kana chero NG dimensions inogara.
100% kutwasuka, flatness uye perpendicularity vari mukushivirira.
Kwese kusawirirana pakati pekuisa kuri mukati me 0.1mm.
T2 samples dzinofanirwa kuendeswa kune mutengi webasa uye bvunzo bvunzo, kutaurirana nemutengi kana paine mhinduro kubva kubvunzo.Kana pasina shanduko yeinjiniya isu tichagadzirisa mold sechirongwa.
Kugadzirisa zviyero zvese.
T3 tryout mold inofanirwa kupedzwa zvizere zviyero uye nyaya dzemuenzaniso.
Turusi yemvumo yekuedza (TA kana T4) inofanirwa kuenderera mberi 2-4 maawa kuratidza mashandiro e mold uye mhando yemhando.Mushure mekuedza kwapera pakupedzisira tarisa mold isati yatumirwa.
Pamusoro pane pfupiso yemaitiro e-pre-deformation mold mold.ruzivo rwakadzama ndapota taura nesu neharry@enuomold.com
Ndatenda nenguva yako!
Nguva yekutumira: Sep-28-2020